အော်တို shell ကိုစိတျအပိုငျးဆေးထိုးတန်ဆာ China Manufacturer
မော်တော်ယာဉ် Shell ကဆက်စပ်ပစ္စည်း,အထူး Surface ကကုသမှု,မော်တော်ယာဉ်ရှဲလ်များအတွက်တိကျ Injection ကိုမှို
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်: 41% - 50% Cert: ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်: မော်တော်ယာဉ် Shell ကဆက်စပ်ပစ္စည်း,အထူး Surface ကကုသမှု,မော်တော်ယာဉ်ရှဲလ်များအတွက်တိကျ Injection ကိုမှို
Home > ထုတ်ကုန်များ > ပလပ်စတစ်မှို > Precision ပလတ်စတစ်မှို > အော်တို shell ကိုစိတျအပိုငျးဆေးထိုးတန်ဆာ
 အော်တို shell ကိုစိတျအပိုငျးဆေးထိုးတန်ဆာ
အော်တို shell ကိုစိတျအပိုငျးဆေးထိုးတန်ဆာ, Automobile shell ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားတိကျစွာထုတ်ကုန်ဆေးထိုးတန်ဆာ, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု, နည်းပညာ မှလွဲ. မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းများအထူးသ၏, မော်တော်ကား shell ကိုအစိတ်အပိုင်းများကားများ၏ယာဉ်မောင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းကားမောင်းသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးသင့်တယ်မသာ။ အသုံးပြုသောပစ္စည်းလျှပ်စစ်လျှပ်ကာနှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ၏ပစ္စည်းဖြစ်ရပါမည်။ မော်တော်ယာဉ်အခွံများအတွက်တိကျဆေးထိုးတန်ဆာများတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအများအားဖြင့် PA ဆိုပြီးနှင့်ဖန်ထည်ဖိုင်ဘာကောင်းသောဓာတုတည်ငြိမ်မှု, ကောင်းသောခွန်အားကိုအပူခုခံ, ချေးခုခံ, သက်ရောက်မှုခုခံ, ခိုင်မာသောခုခံနှင့်မြင့်မားသောအပူခုခံအတူ PA66 အားဖြည့်နေကြသည်။ မသာမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်း, အာကာသ, ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးလိုင်း၏အခွံဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန, တိကျတူရိယာ, အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ shell ကိုကားများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည် ဖြစ်. , အထူးမျက်နှာပြင်ကုသမှုလိုအပ်နေပါသည်။ ကျနော်တို့အပြောင်းအလဲနဲ့အတွေ့အကြုံ, ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်တည်ငြိမ်နှင့်အတူဖြစ်စဉ်ကိုစီးဆင်းမှု၏အနှစ်နှင့်အတူ 50 ကျော်အဆင့်မြင့်မှိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးတန်ဆာများနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမြင့်မားသောတိကျဆေးထိုး 60 စက်, ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအရညျအသှေးများ၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ, ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဂုဏ်သတင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမျိုးသားရေးလက်မှတ်စံမှတဆင့် ISO9001 လက်မှတ်လွန်ပြီ။
UAV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အပိုင်းများအတွက် CNC စက်မဂ္ဂနီစီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
mg အလွိုင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းရေမှုံရေမွှား Coating Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Related Products List: မော်တော်ယာဉ် Shell ကဆက်စပ်ပစ္စည်း , အထူး Surface ကကုသမှု , မော်တော်ယာဉ်ရှဲလ်များအတွက်တိကျ Injection ကိုမှို , မော်တော်ကား Precision ဆက်စပ်ပစ္စည်း , မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Frame ကဆက်စပ်ပစ္စည်း , မော်တော်ယာဉ်ပေါင်း Injection ကိုကုန်ပစ္စည်း , မော်တော်ယာဉ်ထိုင်ခုံမှို , အော်တိုခန္ဓာကိုယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း